U-Yesmail Wongeza iiNgxelo ze-imeyile zangaphandle zeMidlalo kunye neMozulu | Martech Zone
Njengabathengisi, sihlala sicinga ngedatha yabathengi kunye nokuziphatha njengemihlaba emileyo njengobudala, ikhowudi yeposi, kunye nomnini khaya. Nangona kunjalo, siyaphoswa kukuhamba bukhoma kweziganeko ezenzeka kubomi babathengi. Iziganeko ezilula njengokutshintsha kwemozulu zinokutshintsha indlela yokuziphatha komthengi kunye nemikhwa yokuthenga. Ukuba ikhephu lisendleleni, umzekelo, sinokuthi sithengele amavili amatsha okanye i-snowblower kwindlela yethu yokuhamba.
Ekujoliswe kuko, kwangexesha, kunye nonxibelelwano olufanelekileyo ngokomxholo bafumana eyona ndibano iphezulu yabathengi. Imikhankaso ebangelwe zizifanela zonke ezi nkcazo kwaye ngokufezekisa amaxesha angama-2.5 kwinqanaba elivulekileyo lephulo-njengesiqhelo, kunye nokuphinda kabini inqanaba lokucofa. Nangona kunjalo, abathengisi basasokola ukuseta kunye nokuthumela imiyalezo ebangelwe kukutsha. U-Yesmail oQhuba ubuhlakani ivumela abathengisi ukuba basebenzise amandla emozulu yendalo kunye nemicimbi yezemidlalo ukuseta imikhankaso ye-imeyile ethetha kwiminqweno yababhalisi, indawo, kunye nokusingqongileyo kwangoko, ngexesha lokwenyani.
Ngokwesiqhelo, ababoneleli ngeenkonzo ze-imeyile benza ukuba umxhasi ajongane nenkqubo yokwenza i-imeyile isebenzise usetyenziso lwenkqubo yokujongana nayo. Kuhle ukubona U-Yesmail oQhuba ubuhlakani enikiweyo, eyenza ukuba kube lula kakhulu kwishishini eliphakathi ukudibanisa amaphulo okubangela umsitho kumxube wabo wentengiso.
Qalisa ubukrelekrele kwimozulu
Ubukrelekrele boQeqesho lwemozulu lwenza ukuba abathengisi bacwangcise imikhankaso ye-imeyile ehambisa izibonelelo xa imeko yemozulu ebekiweyo isenzeka kwindawo ethile. Iifilitha zemozulu zibandakanya:
Uluhlu lwesantya somoya
Imozulu: kunamafu, inkungu, imvula ebandayo, isichotho, imvula, ikhephu, ilanga, isiphango
Qalisa ubukrelekrele kwezemidlalo
Ubukrelekrele boQeqesho kwezeMidlalo bunika abathengisi amandla okucwangcisa unxibelelwano nge-imeyile olusebenzayo xa kwenzeka isiganeko esithile somdlalo. Iifilitha zemidlalo zibandakanya:
Ubude bexesha (ukugqitywa komdlalo, isiqingatha sexesha, ikota / ukugqitywa kwexesha)
Iziphumo zokugqibela (ukuphumelela / ukulahleka)
Amanqaku afunyenwe (emva kwe-5 touchdowns, emva kwenjongo ye-1, emva kweebhasikithi ezili-100, njl.
tags: i-imeyile ebangelaezemidlalo imeyile ibangelaI-imeyile yemozulu inokubangelaEweI-imeyile ye-imeyile ibangelayesmail ibangelayesmail kubangela ubukrelekrele